कच्चा टेस्टोस्टेरोन आइसोस्प्रोनेट पाउडर (एक्सएनएक्सएक्स-एक्सएनक्स-एक्सएनएक्सएक्स) एचपीसीएक्सएनएनएनएक्सएक्स% | AASraw
/ उत्पादन / एनाबोलिक्स स्टेरियोड्स / टेस्टोस्टेरोन पाउडर सीरीज / टेस्टोस्टेरोन Isocapronate पाउडर
SKU: 15262-86-9. विभाग: टेस्टोस्टेरोन पाउडर सीरीज, एनाबोलिक्स स्टेरियोड्स
AASraw ग्रैण्डबाट टेस्टोस्टेरोन इस्स्कोप पाउडर (15262-86-9) को संश्लेषण र उत्पादन क्षमताको साथ हो, सीजीएमपी विनियमन र ट्र्याबल योग्य गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत।
टेस्टोस्टेरोन आइकोप्रोट पाउडर, यो एक anabolic स्टेरॉयड होइन, तर एक एस्टर जो धेरै लोकप्रिय साइप्रियोनेट वा एननाथेट एस्टर्स जस्तै एक नै स्ट्रेडमा संलग्न हुन सक्छ। Isocaproate पनि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन संग संलग्न हुन सक्छ, तर यो योपैपेट को मामला मा यो सामान्यतया एकमात्र ठाँउ हो जसको हामी यसलाई संलग्न छ।
नाम: टेस्टोस्टेरोन इस्स्कोप पाउडर
पिघल प्वाइन्ट: 53-55 ℃
टेस्टोस्टेरोन इस्स्कोप पाउडर चक्र
टेस्टोस्टेरोन इस्स्कोप पाउडर (सीएएस 15262-86-9) ब्रान्ड नामहरू Sustanon 100 (रोकिएको), Sustanon 250, ओमनेड्रेन 250 वा टेस्टोस्टेरोन 4-मेथाइलवलरेट
टेस्टोस्टेरोन इस्स्कोप पाउडर प्रयोग
Isocaproate, यो एक anabolic स्टेरॉयड होइन, तर एक एस्टर जो धेरै लोकप्रिय साइप्रियोनेट वा एननाथेट एस्टर्स जस्तै एक नै स्ट्रेडमा संलग्न हुन सक्छ। Cypionate र Enanthate जस्तै, Isocaproate पनि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन संग संलग्न हुन सक्छ, तर Isocaproate को मामला मा यो सामान्यतया एकमात्र स्थान हुनेछ जुन हामी संलग्न छ। टेस्टोस्टेरोन-आइकोप्रोरेट, एक एस्ट्रिक फारम वस्तुतः अनन्त छ; यदि तपाईंले यसलाई फेला पार्नुभयो भने यो सम्भावना एक विशेषता क्रम भन्दा बढि थियो, र वास्तवमा यो एक्स्टेर फारममा टेस्टोस्टेरोन-आइकोप्रोनेट को आवश्यकताको वास्तवमा कुनै कारण छैन। जहाँ हामी Isocaproate एस्टर को सबै भन्दा सामान्य पाछन र जहां यो एक ठूलो लाभ को टेस्टोस्टेरोन मिश्रण मा छ। विशेष गरी Omnadren र Sustanon-250। Omnadren र Sustanon-250 संलग्न चार अनुमानहरूसँग टेस्टोस्टेरोन यौगिक दुवै छन्; चार भिन्न आकारमा फरक अनुमानहरू जसले एक कुल टेस्टोस्टेरोन कम्पाउन्ड बनाउँछ। सबै तीव्र उद्देश्यहरूका लागि, यी दुई यौगिहरू प्रायः समान छन्; तिनीहरूको कुल श्रृङ्खला लगभग एक एस्टरको साथमा समान छ, र जस्तै यस्तै लाभहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ।
Testosterone Isocapronate पाउडर को खुराक के छ
दुवै यौगिहरूको साथ तपाईसँग 250mg / मिलीलीटर टेस्टोस्टेरोनको हो र सानो देखि ठूलो एस्टरको मिश्रणले तपाइँसँग सबै फारामहरूसँग सम्बन्धित फाइदाहरू प्राप्त गर्दछन्। उदाहरणका लागि, तपाईंले भविष्यवाणी र फिनेलोप्रपिओनेट एस्टर्सको कारणले छिटो अभिनय टेस्टोस्टेरोन कम्पाउन्डको फाइदाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, र तपाइँ क्याप्टोरेट वा डिसेनो एस्टेरको कारणले लामो समय सम्मको टेस्टोस्टेरोनको फाइदा प्राप्त गर्दछ। Isocaproate एस्टर को लागी, यो एक मध्यम आकार को एस्टर छ जो सानो र ठूलो एस्टर को बीच को बीच को बीच मा भूमिका को भरती छ। कुनै पनि दरमा, Isocaproate एस्टरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ किनभने यो रक्त स्तर स्थिर रहन मद्दत गर्दछ, र कुल कम्पाउन्ड मार्फत तपाइँले लामो समयको लागि कुल टेस्टोस्टेरोन फाइदा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यो सबै मनमा, हामी आधारभूत प्रकृति, पूरक को लाभहरू र निश्चित रूपमा प्रयोगको साइड इफेक्ट र त्यसो गर्दा तपाईलाई सफल पूरक तपाईं चाहानुहुन्छ सक्षम बनाउन चाहनु हुन्छ।
टेस्टोस्टेरोन आइसोस्प्रोनेट पाउडर कसरी काम गर्दछ
यो आइसोक्रोट मात्र एक एन्सर हो, एनाबोलिक स्टेरॉयड होइन, हामी मात्र यसलाई हार्मोनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, र यस अवस्थामा, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो। टेस्टोस्टेरोन एक शक्तिशाली एनाबोलिक र एन्ड्रोजेनिक स्टेरॉयड हो जुन सबै मनुष्य द्वारा उत्पादन गरिएको छ र अनिवार्य रुपमा। पूरक को माध्यम ले, हामी केवल exogenous प्रशासन को माध्यम ले एक सिंथेटिक रूप प्रदान गर्दै छन्; शरीर यस बहिष्कार रूप मा अंतर को थाहा छैन या यो स्वाभाविक रूप देखि पैदा गर्दछ; यो एउटै हार्मोन हो। हाम्रो शारीरिक, यौन र पनि मानसिक स्वास्थ्यमा भूमिका खेल्दै, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन महत्त्वपूर्ण छ, र केवल एक चीज हो जुन वास्तवमा एक कम स्तरको अवस्थाको समाधान गर्नेछ। निस्सन्देह, स्वाभाविक रूपमा उत्पादन गर्न सक्नु भन्दा पनि अधिक टेस्टोस्टेरोन प्रदान गरेर, हाम्रो उच्च स्तरको उच्च स्तरमा लिनु हामी विशेषताहरू बढ्छौं; हामी प्रदर्शन बढाउँछ किनकि त्यहाँ शरीरको लागि अधिक टेस्टोस्टेरोन उपलब्ध छ। यस्तो पूरक को माध्यम ले, प्रोटीन संश्लेषण बढाएको छ, दर को कोशिकाओं प्रोटीन को निर्माण, को रूप मा नाइट्रोजन अवधारण हो; सबै मांसपेशी ऊतकों को कुल संरचना को 16% को प्रतिनिधित्व नाइट्रोजन। यसबाहेक, यस्तो पूरकले रक्त रगत कक्ष गणना बढाउँछ, यसैले रगत ओक्सीजनन बढ्छ, र ग्लुकोकोक्कोइड हार्मोन उत्पादन पनि कम गर्छ। ती व्यक्तिहरु को लागी को लागी ग्लुकोकोर्टिकोड्स थाहा छैन, यी तनाव हार्मोनहरू हुन् जसले मांसपेशिहरु ऊतक नष्ट गर्दछ र वसा लाभ बढाउँछ।
जबकि ती केहि प्रचलित विशेषताहरू छन्, टेस्टोस्टेरोन पनि इन्सुलिन-जस्तै वृद्धि कारक-1 (आईजीएफ- 1) उत्पादन बढ्छ; आईजीएफ-एक्सएनएमएक्सले तीव्र एनाबोलिक पावरको शक्तिशाली स्वाभाविक रूपमा पेप्टाइड हार्मोन बनाउँछ; भारी मात्रामा रिजर्भेसन गुणहरू उल्लेख गर्न उल्लेख छैन। यस र सबै माथि उल्लेखित विशेषताहरु मार्फत, कुल एनाबिक वायुमेशन बढेको छ, तपाईंको चयापचय पुनरुत्थान हुन्छ र यो सबै अधिक प्रभावकारी र कुशल हुन्छ। निस्सन्देह, तपाईले यी सबै अर्थहरू के फाइदा लिन सक्नुहुन्छ फाइदाहरूको सन्दर्भमा, र तपाईं चिकित्सक अर्थमा यो सबै को के सोध्न सक्नुहुन्छ? यो उपचार चिकित्सक संग सम्बन्धित छ, माथि उल्लेखित सबै लक्षणहरू कम छन् र पूरक तिनीहरूलाई एक उचित स्तरमा ल्याउँछ। यसबाहेक, जस्तै टेस्टोस्टेरोनले हाम्रो लिबोदोलाई नियामक बनाउँछ, यौन प्रदर्शन र हाम्रो ऊर्जा स्तरमा पनि भूमिका खेल्छ, सोच्ने स्पष्टता र सामान्य डिस्पोजेशन स्पष्टीकरण सबै प्रकारका क्षेत्रमा सुधारिएको छ। बेशक, यो Isocaproate टेस्टोस्टेरोन आधारित यौगिहरु चिकित्सीय प्रयोजनों को लागि कम से कम निर्धारित छ, सामान्यतया एक एस्टर टेस्टोस्टेरोन यौगिहरु को यस्तो अन्त सम्म पुगन को लागि प्रयोग गरिन्छ; जस्तो कि यो मामला हो, प्रदर्शन साँच्चै मात्र एक मात्र चिन्ता हो, र दिमागमा यो एक नजर ले।
Testosterone Isocapronate पाउडर को लाभ
ओयोसेप्रोट आधारित यौगिकहरू जस्तै ओमडेनन र सुस्टान्नन-एक्सएनएमएक्सको फाइदा दुई सामान्यकृत वर्गहरूमा विभाजित गर्न सकिन्छ; उपरोक्त विशेषताहरु द्वारा प्राप्त लाभहरु र यस प्रकार को यौगिक एक एकल एस्टर फार्म को तुलना मा प्रदान गर्दछ। जस्तो कि प्रारम्भिक छलफलमा, टेस्टोस्टेरोन मिश्रण को लाभ दुवै साना साना र ठूलो एस्टेर अर्थ मा उत्तम संसार प्रदान गर्दछ, र यो एक समग्र अवधि को अर्थ मा लामो समय सम्म चलने प्रभाव संग एक तेज अभिनय टेस्टोस्टेरोन प्रदान गर्दछ। त्यो अधिकृत सरलीकृत हुन सक्छ, तर यसको तुलनामा यसको लागि केहि पनि केहि छैन। त्यसपछि हामी माथिको लक्षणहरूमा आधारित वास्तविक लाभहरू छन्, र जस्तै Omnadren र Sustanon-250 प्रदर्शनको लागि लगभग कडा प्रयोग गरिन्छ। हामी केवल त्यो प्रकाशमा फाइदाहरू फोकस गर्न जाँदैछौं।
अफ-सिजन एथलीटका लागि, व्यक्ति दुबई जनसम्पर्क र शक्तिको महत्त्वपूर्ण मात्रा थप्न खोज्दै हुनुहुन्छ, योकोप्रोट फारमहरू एक उत्तम छनौट हुन् किनभने तिनीहरू महत्त्वपूर्ण रूपमा दुवै पक्षलाई बढावा दिन सक्नेछन्। यसको अतिरिक्त, वृद्धि भएको चयापचय वातावरण द्वारा, तपाईं अब कम शरीर-मोटो संचय संग अधिक दुबला जन प्राप्त गर्न सक्षम छन्, र यो अमूल्य छ। निस्सन्देह, उस्तै यौटाहरू पनि काटनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ; आखिर, एक विस्तारित चयापचय को अर्थ मा वसा जलने क्षमताहरु लाई बढायो, र टेस्टोस्टेरोन को एक विशाल लीन ऊतक प्रिरवर को रूप मा यो केवल एक कटौती योजना को लागि एक उत्कृष्ट विकल्प हो।
यदि यो पर्याप्त छैन भने, तपाईंको यो प्रयोजन को लागी यी योकोप्रोटेट आधारित टेस्टोस्टेरोन यौगिकले तपाईंको पेशी सहनशीलता बढाउन सक्छ; तिनीहरूले तपाईको पुन: प्राप्तिको समग्र दर बढाउँछन् र तपाइँलाई अधिक ऊर्जा प्रदान गर्दछ। तपाईं छिट्टै टाढा बाहिर टाढा हुनुहुन्न, तपाईं निको पार्नुहुनेछ र तपाईंको शरीरले छिटो र अधिक कुशल दरमा सुधार गर्नेछ, र यदि त्यो प्रदर्शन वृद्धि बढ्दैन कुनै पनि छैन। धेरै तरिकामा, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड बुझ्न सबै भन्दा सरल मध्ये एक हो, सबै भन्दा सरल मध्ये एक, तर यो सरल हुन सक्छ यो बहुमूल्य र सम्भवतः सबै भन्दा बहुमूल्य एनाबोलिक एन्ड्रोजेनिक स्टेरिइडको सबै समय हो। यसबाहेक, जब यो स्वस्थ वयस्क पुरुषमा आउँछ, यो सबै भन्दा राम्रो-सहनशीलताको एक हो, र त्यहाँ भन्दा बढी मूल्यवान छैन।
टेस्टोस्टेरोन इस्स्कोप पाउडर (सीएएस 15262-86-9)
टेस्टोस्टेरोन Isocapronate पाउडर मार्केटिंग
के टेस्टोस्टेरोन आइसोस्प्रोनेट पाउडर छ कुनै साइड इफेक्ट्स
Isocaproate टेस्टोस्टेरोन यौगिकों को साइड-इफेक्ट सबै टेस्टोस्टेरोन यौगिकों को समान हुनेछ, र यो ठूलो मात्रा मा उनि संभव हो र सामान्यतया 100% पापी योग्य स्वस्थ वयस्क पुरुष द्वारा। निस्सन्देह, एक स्वस्थ वयस्क नरले भनेको होइन कि तपाईं केवल एक गंभीर अवस्थाको कमी हुनुहुन्छ, तर यो पनि तपाईंको रक्तचाप र कोलेस्ट्रॉल स्तर उचित छ र तपाईं उत्कृष्ट समग्र स्वास्थ्यमा हुनुहुन्छ। यसबाहेक, जिम्मेवार प्रयोग आवश्यक छ, र यसको अर्थ तपाईं यस्तो राम्रो स्वास्थ्य को निरन्तरता बढाउने तरिकामा पूरक गर्न तयार हुनुहुन्छ; यदि तपाईं आफ्नो शरीरलाई हानिकारक बनाउनुहुन्छ भने, यो जिम्मेवार पूरकको रूपमा लेबल गर्न सकिदैन। कुनै पनि अवस्थामा, चलो टेस्टोस्टेरोनको सम्भावित साइड-इफेक्टमा हेरौं, तपाईको बारेमा के गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको सफलता सुनिश्चित गर्नुहोस्।
यदि यो टेस्टोस्टेरोन यौगिक हो, र यो आइसोप्रोट यौगिकहरू जस्तै ओमडेनन र सुस्टान्नन-एक्सएनएमएक्सको लागि जान्छ वा कुनै कम्पाउन्ड जसलाई तपाईँले यो बारे सोच्न सक्नुहुन्छ यो aromatize जाँदैछ; सुगन्धीकरण एस्ट्रोजन मा टेस्टोस्टेरोन को रूपान्तरण को संदर्भित गर्दछ। एस्ट्रोजन को स्तर को वृद्धि को रूप मा, यो नेतृत्व को और सभी के सबसे आम anabolic स्टेरॉयड साइड इफेक्ट में नेतृत्व कर सकते हैं; धन्यबाद, तिनीहरू सबैलाई टाढा राख्न सक्दछन्। निस्सन्देह, त्यहाँ एक पक्ष प्रभाव हो जुन वास्तवमा सबै पुरुषहरूमा ग्यारेन्टी गरिएको छ जुन पूरक तर अर्थहीन उचित प्रयोग संग; हामी त्यस पछि छलफल गर्नेछौं तर चल्न पहिलो सम्भावित हेरौं; टेस्टोस्टेरोनको सम्भावित साइड इफेक्ट समावेश छ:
• Gynecomastia - एस्ट्रोजन स्तरको वृद्धिको रूपमा, हार्मोनले जुनेकोमास्टिया वा पुरुष-स्तन वृद्धिको कारण रिसेप्टरहरूलाई जोड्दछ, तर यसले घट्न सक्दैन। एक अस्ट्रुरोल (एरिमेडाइक्स) वा लेजोजोल (फसरा) जस्तै अरोमाटेज अवरोधक (एआई) प्रयोग गरी तपाइँ यस्तो अवस्थाबाट जोगिन सक्नुहुनेछ। एआईले घटनाबाट aromatase प्रक्रिया रोक्छ, र शरीरको कुल एस्ट्रोजन स्तर पनि कम गर्दछ; यदि यो अवस्थित छैन यो समस्याको कारण हुन सक्दैन। निस्सन्देह, चयन एस्ट्रोजन रिसेप्टर मोड्युलेटर (SERM को) यस प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन Tamoxifen Citrate (नोल्वाडक्स), तर तिनीहरू पर्याप्त छैन। SERM को प्रकार्य रिसेप्टरहरुमा बाध्यकारी गरेर यसैले एस्ट्रोजन को बाध्यकारी देखि रोकथाम; तिनीहरू aromatase वा कम एस्ट्रोजन स्तरहरू रोक्न, र यसको अर्थ हो AI को हाम्रो उद्धार अनुग्रह हो।
• पानी प्रतिधारण - सुगन्धीकरणको कारण अतिरिक्त एस्ट्रोजन अपराधी हो, र अधिक एस्ट्रोजेनले तपाइँसँग सुरुवात गर्न नियमित फ्लोटिंगमा अधिक संवेदनशील बनाउँछ। जब तपाईं ओभरले गर्दा, विशेष रूप देखि कार्बोहाइड्रेट तपाईं पानी धारण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, र यदि एस्ट्रोजन स्तर उच्च छन् यो पनि खराब हुन जाँदैछ। निस्सन्देह, यदि तपाई एआई प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईंको आहार नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, तपाइँसँग कुनै समस्या छैन, र यदि तपाईं अझै पनि ए प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अझैसम्म यसको अर्थ भन्दा बढी पानी राख्नुको अर्थ हो भने तपाईंको आहार उचित नभएको छैन जस्तो कि तपाईं यो विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ।
• उच्च कोलेस्ट्रॉल - अतिरिक्त एस्ट्रोजनले उच्च LDL कोलेस्ट्रल स्तरहरूमा योगदान दिन सक्छ, तर डाइभिंग र तपाईंको समग्र जीवनशैलीले अरू कुनै भन्दा बढी भन्दा ठूलो भूमिका खेल्नेछ। यस कारणको लागि, उचित खुट्टाहरू आवश्यक छन्, तर त्यसो भए जीवन शैली जीवन शैली हो जसले कोलेस्ट्रल अनुकूल छ। यो एक उचित आहार, धेरै व्यायाम र सबै क्रियाकलापबाट बच्न सक्ने एक नकारात्मक प्रभाव हो। यदि तपाइँ यो गर्न सक्नुहुन्छ भने, मान्नुहुन्छ कि तपाईसँग राम्रो हुन सक्छ भने उच्च कोलेस्ट्रलको आनुवंशिक भविष्यवाणी छैन।
• उच्च रक्तचाप - अतिरिक्त एस्ट्रोजनले उच्च रक्तचापमा योगदान दिन सक्छ, तर डाइभिंग र तपाईंको समग्र जीवनशैली कुनै पनि भन्दा बढी भन्दा ठूलो भूमिका खेल्नेछ। यस कारणको लागि, उचित खुट्टाहरू आवश्यक छन्, तर यसैले रक्तचाप मैत्री जीवन शैली जीवन बिताइरहेको छ। यो एक उचित आहार, धेरै व्यायाम र सबै क्रियाकलापबाट बच्न सक्ने एक नकारात्मक प्रभाव हो। यदि तपाइँ यो गर्न सक्नुहुनेछ भने, मान्नु पर्छ तपाईसँग उच्च रक्तचापमा जेनेटिक भविष्यवाणी छैन तपाईं ठीक हुनुपर्छ।
जसको रूपमा हामीले उल्लेख गरेका छौं, माथिको पक्ष-प्रभाव सम्भव छ, तर त्यहाँ एक प्रभाव हो जसले पूरै पूरै सहयोग पुर्याउँछ; तपाईंको प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादनको दमन। यो Isocaproate टेस्टोस्टेरोन यौगिक वा कुनै टेस्टोस्टेरोन यौगिक को एक अद्वितीय अवधारणा होइन; वास्तवमा, यो एउटा अवधारणा हो जुन सबै एनाबोलिक स्टेरियोडहरूसँग सत्य हुनेछ। निस्सन्देह, प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन दमनले कम टेस्टोस्टेरोन अवस्थाको नेतृत्व गर्न सक्छ, तर तपाईंको अवस्थामा, किनकि तपाइँ बहिष्करणको टेस्टोस्टेरोनसँग पूरै हुनुहुन्छ भने यो कुनै चिन्ताको छैन; सबै पछि, तपाईंले आफ्नो शरीरलाई आवश्यक सबैलाई प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। यद्यपि, प्राकृतिक उत्पादनको दबाइको कारणले यो तपाइँको टाउको दुख्ने गर्दछ, तर त्यहाँ सुसमाचार छ। एकपटक सबै बहिष्कार स्टेरॉइड प्रयोग रोकिएको छ र सबै बहिष्कार स्टेरॉयडल हार्मोनले तपाइँको प्रणाली सफा गर्यो। तपाईंको टेबुलले उनीहरूको सामान्य साइजमा फर्काउँछ किनभने प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन उत्पादन फेरि सुरु हुने छ। यो ध्यान दिनुपर्छ; पुन: प्राप्ति मानिन्छ कि तपाईले एचपीटीए खराब गरीएको पूरक प्रविधिको कारणलाई हानिकारक गर्नुभएन, र तपाइँ पूरै पूरै भन्दा कम टेस्टोस्टेरोन बाट पीडित गर्नुभएन।
AASraw बाट टेस्टोस्टेरोन इस्स्कोप पाउडर (CAS 15262-86-9) कसरी खरीद
AASraw शुद्धता 98% टेस्टोस्टेरोन Isocaproate कच्चे पाउडर को चोट को उपयोग को लागि bodybuilders या भूमिगत प्रयोगशालाओं को लागि प्रदान गर्दछ।
टेस्टोस्टेरोन Isocapronate कच्चा पाउडर व्यञ्जनहरु: